20 yakavhurika sosi maturusi okusunungura kugona kwako | Linux Vakapindwa muropa
20 yakavhurika sosi maturusi okusunungura kugona kwako
Kana zvako zviri kugadzirwaIwe unofarira kushandisa komputa yako kugadzira zvemukati, ingave mifananidzo yechero mhando, kunyora mimhanzi yako, kunyora mavhidhiyo, nezvimwe, iwe unofanirwa kuziva kuti kune akawanda maturusi eichi. Pamusoro pezvo, nhasi ticha kukumikidza izvo zvisina kana godo kune avo vekubhadhara, uyezve, pazviitiko zvakawanda vanozvikunda, asi zvakare yakavhurika sosi. Uye kana izvi zvichiita sezvishoma kwauri, zvinoenderana neyako GNU / Linux kugovera, saka haufanire kunetseka nezvazvo.
Pasina kupokana, hunyanzvi hunhu hombe hwevanhu, uye dzimwe nguva haikurudzirwi kana kushandiswa zvisizvo sezvaunofanirwa. Saka kuti haisi yako kesi, pano ini ndagadzirira 20 zvishandiso zvakanaka open-sosi yekuita ako aunofarira mapurojekiti. Chokwadi navo unogona kuita zvinonakidza zvinhu. Sezvo ini ndichigara ndichitaura nemhando idzi dzezvinyorwa, kune zvakawanda zvimwe, zvirokwazvo unoziva vamwe vamwe, kana iwe uchida kugovana zvaunogona, ndichafara kana ukasiya chirevo nemipiro yakawanda, asi uku ndiko kusarudza kwedu:
Blender: sekuziva kwako kwakasimba kwazvo 3D modelling, yekuratidzira uye yekuenzanisa nharaunda. Iyo yakatove ichishandiswa nemafirimu makuru eHollywood nemitambo yemavhidhiyo.
InkScape: zvekutaura nezve ino vector gadziriso mhariri, kwandiri ndiyo yakanakisa kupfuura mamwe mapurojekiti akabhadharwa ...
GIMP: makwikwi eAdobe PhotoShop, yemahara uye isina zvishoma yekugodora chirongwa chakabhadharwa, iwe unofanirwa kungojairira kumwe shanduko uye maturusi matsva.
choko: kuitira kuti mifananidzo yako ive yepro pro, neiyi huru yemahara chirongwa yekudhirowa.
Audacity: kana izvo iwe zvaunoda zviri mutsindo, gadzirisa yako wega neiyi hombe edhita.
Scribus: shambadzira kubva kudesktop yako seprojekiti neichi chinyorwa chinyorwa chirongwa.
SIGIL: zvinyorwa zvako zvemadhijitari pamunwe wako.
trelby: nyora zvakasununguka neiyi software yekunyora.
Pinta: Paint muchitaera cheMicrosoft.
kdenlive: rongedza ako mavhidhiyo uye gadzira ako wega audiovisual zvemukati zvinyorwa.
Openshot: zvakafanana nepamusoro, zvakafanana nezvirongwa zvakaita seMagix Vhidhiyo Mugadziri, Sony Vegas, nezvimwe.
Shotcut: chimwezve chishandiso chekugadzirisa ako mavhidhiyo uye kuita ako akacheka
Soda yekubikisa: dhizaini dhizaini uye post-kugadzirisa.
Ardor: kune avo vanoda kusanganisa manzwi uye kurekodha.
qtractor- Imwe nzira yakanaka kune Ardor.
Rosegarden uye MuseScore: mapurogiramu maviri emumhanzi kurova, kwaunogona kuisa zvibodzwa zvako nyore.
hydrogen: muchina wedhiramu pamaoko ako.
mesh lab: Laborator ye 3D modelling uye kudhinda.
Mixxx: kana iwe uchinzwa senge DJ, ichi chirongwa chakanaka.
Ndiani anoti hapana mapurogiramu emahara ehunyanzvi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » 20 yakavhurika sosi maturusi okusunungura kugona kwako
Victor Sereno akadaro
Chinyorwa chakanaka kwazvo. Ini ndaizowedzera cinelerra, ine simba isiri-mutsara vhidhiyo mupepeti anomira kumusoro kuAdobe premiere pro.
Pindura Victor Sereno
MyPaint yakanaka kwazvo futi, ndeye kudhirowa uye kupenda.
Kusava nechokwadi ndinako. Trelby yekunyora zvinyorwa here?
Mubvunzo mumwe wandiri kutsvaga akati wandei asi ini ndichatanga neuyu, uyo wakavhurika sosi uye unoratidzika senge munyori wekutaura chirongwa ichi ndechevanyori vezvinyorwa uye imwe yemahara software yevashanduri
Pindura kune deivis
10 mitambo yemavhidhiyo yekutamba kubva kune iyo terminal yausingakwanise kupotsa
Ubuntu Foramu Yabirwa